Scums Wish - समाप्ति व्याख्या गरिएको - पालना दृश्य
एनिम गहिरो अन्त्य विवरण कुजु नो होन्काइ
by Dima 22nd जनवरी 2021 12th जनवरी 2022
6 टिप्पणिहरु Scums Wish मा - अन्त्य वर्णन गरिएको
अवलोकन - स्लम्स इच्छा | अन्त्य समझाइयो
Scums इच्छा एक नाटकीय रोमान्स एनिमे हो जुन years बर्ष अघि बाहिर आयो। Anime को कहानी पछि लाग्छ हानबी यासुराओका र मुगी अवाया जो एक सम्बन्ध भएको तथ्यलाई बावजुद तिनीहरू प्रेममा छैनन्। को एनिमे यसको भावनात्मक कथाको कारणले उच्च समीक्षाहरू प्राप्त गर्यो जसले यसलाई धेरै दर्शकहरूको लागि उत्कृष्ट घडी बनायो।
यसको कारण असम्बन्धित प्रेमको दुखद कथा हो र यसमा यासुराओका र दुवै समावेश छन् अवा र अन्य पात्रहरूको सम्पूर्ण होस्ट।
यस लेखमा, हामी एनिमेसनको अन्त्यमा जाँदैछौं Scums इच्छा र यसलाई पूर्ण व्याख्या गर्दै। को अन्त्य Scums इच्छा असन्तुष्ट र अनिर्णयको रूपमा हेरिएको थियो किनभने दुर्भाग्यवश, यसले वास्तवमा पहिलो सिजनबाट उत्पन्न भएका कुनै पनि समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन। हामीले पहिले नै कभर गरेका छौं यो anime को बारेमा हाम्रो लेखमा सीजन2of Scums इच्छा तपाईं त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ.
कथा कसरी सुरु हुन्छ - स्लम्स इच्छा | अन्त्य समझाइयो
कथा २ हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई पछ्याउँछ, हानबी यासुराओका र मुगी अवाया जसले अर्काको यौन रुचिको बारेमा थाहा पाउँछ। यासुराओकालाई उनको शिक्षक र पुरानो बाल्यकालका गुरु मन पर्छ, श्री कानई र अवा आफ्नो संगीत शिक्षक संग प्रेम छ, अकाने मिनागावा। पहिलो एपिसोडहरूमा, यासुराओका, वा हानालाई म उनको रूपमा सन्दर्भ गर्दछु ओवा वा साकार रूपमा मुगी म उहाँलाई प्रेम को रूपमा संदर्भ छ रूपमा मिनागावा। हानाले यो नोटिस गरी र सोधिन् मुगी उनको लागि उनको प्रेम को बारे मा। मुगी हानालाई उसको प्रेमको बारेमा बताउँदछ यो शिक्षक र कति समयदेखि उसको लागि यी भावनाहरू छन्।
त्यसैले सारमा भन्नुपर्दा, दुबै समर्थन र प्रेमको लागि एक अर्कोमा भर पर्न नक्कली यौन सम्बन्ध सुरु गर्न सहमत छन्, प्रेम वास्तविक छैन भने पनि। यो किनभने हाना र मुगी केवल अरूलाई तिनीहरू साँच्चिकै माया गर्छन् एक बहाना गर्नुहोस्। यो एक धेरै अस्वास्थ्यकर र सम्भावित हानिकारक अभ्यास हो कि दुबैले यो लिने निर्णय गर्छन् तर तिनीहरू जे भए पनि यो सोच्दछन् कि यस मार्फत केही सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेछन्।
यासुराओका र अवाको सम्बन्ध - स्म्स स्वाद | अन्त्य समझाइयो
दुईले एकअर्कालाई आफ्नो प्रेमको चासोमा थप प्रश्न गर्छन् र दुवैले स्वीकार गर्छन् कि उनीहरूले आफूले माया गर्नेहरूलाई स्वीकार गर्ने मौका पाउनेछन्। पहिलो एपिसोडमा, दुईले सम्झौता सुरु गर्छन् र एकअर्कासँग बाहिर जान सहमत हुन्छन्, तर तिनीहरू एकअर्कालाई माया गर्ने कारण होइन। दुई एकअर्कालाई माया गर्ने नाटक गर्न सहमत छन् त्यसैले अस्वीकारको पीडा यति ठूलो हुनेछैन जब यो वरिपरि आउँछ। हानाले मुगी श्रीमान भएको बहाना गर्छ कानै र यसको विपरित। यसले जान्छ मुगी र हानाले धेरै यौन मुठभेडहरू गरे र बहाना गर्छन् कि अर्को एक हो जसलाई तिनीहरू प्रेममा छन् त्यसैले तिनीहरूले आफूले चाहेको वास्तविक बारेमा सोच्दैनन्। यो पाठ्यक्रम को समयमा धेरै पटक हुन्छ anime श्रृंखला र दुवैले एक अर्कालाई प्रेम गर्न यथासक्दो प्रयास गर्छन्।
जब पनि वा हानाले अर्कोलाई आफूले साँच्चिकै माया गरेको व्यक्तिबाट विचलित भएको देख्छ, तब उनीहरूले अर्कोलाई कतै लैजान्छ जहाँ तिनीहरू एकान्तमा हुन सक्छन् ताकि तिनीहरूले तिनीहरूलाई विचलित गर्न सकून्। यो विकृत प्रणाली उनीहरूले लामो समयसम्म चलेको जस्तो देखिन्छ, पछिका एपिसोडहरूमा पनि, जब हानाले अर्को महिला पात्रको साथ प्रयोग गर्न थाल्छ जससँग उनी पनि यौन मुठभेडहरू गर्न थाल्छिन्।
उनीहरूको सम्बन्धको अन्त्य - Scums Wish | अन्त्य समझाइयो
कथाको अन्त्य नजिकै मुगी र हाना सहमत छन् कि तिनीहरू आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई सोध्छन् यदि उनीहरूलाई पनि त्यस्तै महसुस भयो र अन्तमा उनीहरूको प्रेम स्वीकार्नुहोस्। तिनीहरू दुबै शुक्रबार एकै समयमा यो कार्य गर्न सहमत छन्, तिनीहरू सहमत छन् कि यदि तिनीहरू दुबै अस्वीकार भए भने उनीहरू घरको नजिकको पार्कमा भेट्ने छन् ताकि तिनीहरू फेरि एकजुट हुन सक्छन्, यदि तिनीहरू सहमत समयमै देखाइनन् भने। , तब अन्यले विश्वास गर्नेछ कि उनीहरू अस्वीकृत भएनन्। यस घटनाको दिनमा, हाना भित्र सम्मिलित हुन सेट श्री कानई र उनलाई कस्तो लाग्छ उसको बारेमा बताउनुहोस् र मुगी गर्न पनि त्यस्तै गर्न जान्छ श्रीमती मिनागावा.
दुर्भाग्यवश एनिमे हाना को लागी, मुगी फर्केर आउँदैन र हानालाई पार्कमा एक्लै छोडिन्छ। यसले हानालाई असर गर्छ र उनी निराश छिन् कि उनी उनको लागि त्यहाँ छैनन्, जब उनले थाहा पाए कि उनी कहाँ थिए उनी पनि छक्क परिन्।
यो पछाडि हानाले बुझे मुगी उहाँ बोल्नुभएन किनभने उहाँ बोल्नुभयो मिनागावा उनी उनीसंग यौन सम्बन्ध राख्न राजी भइन् तर उनी उनलाई चाहिएको कुरा मात्र गरेकी थिई। मिनागावा वास्तवमा प्रेम मा छैन मुगी कुनै पनि हालतमा र उसमा कुनै चासो छैन, उनी आफ्नो वरिपरि राख्छिन् किनभने उनी ध्यान मन पराउँछन्। वास्तवमा, हानालाई जनाउँछ मुगी को रूप मा "एक Akane को fanboys" किनभने उनी स्कूलका धेरै केटाहरूले मन पराउँछन्।
यस घटना पछि, हाना र मुगी एक अर्कालाई कम र कम देख्न सुरु गर्नुहोस् र त्यसपछि अचानक, तर अस्वीकार हाना पछि धेरै समय पछि र मुगी एक-अर्कासँग कुरा गर्न बन्द गर्नुहोस् र एक महिना पछि एकअर्कालाई नहेर्नुहोस् जब तिनीहरू एकअर्कालाई हलमा वा कतै त्यस कुराको लागि पास गर्छन्।
हाना नोट गर्छिन् कि यो कत्ति अनौठो छ, दुईले धेरै यौन मुठभेड गरेका छन् र लामो समयसम्म एकअर्कालाई गोप्य राखेका छन्। वा होइन हाम्रो लेखमा Scums इच्छा एक प्राप्त गर्दछ सीजन2हामी विस्तृतमा गयौं र मङ्गामा यी घटनाहरू पछि के भयो भनेर छलफल गर्यौं। कुजु नो होन्काई भनेर चिनिने दोस्रो स्पिन अफ मंगा छ सजावट जसले केही समय बितिसक्दा क्यारेक्टर के भएको छ भन्ने कुराको अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दछ।
स्पिन-अफ मa्गाको साथ समस्या यो हो कि मूल जत्तिकै यसले निर्णायक अन्त्यको प्रस्ताव गरेको थिएन र केवल बढि अन्तहीन अन्त्य पनि दिएको थियो। यसले अन्तमा प्यानेलमा हानासँग कुरा गरिरहेको झलक देखायो मुगी जहाँ उसले उनलाई प्रेमी पाउनबाट रोक्न भन्यो। तपाईं यस लेखमा यसको बारेमा अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ:
अन्त्य दृश्य - स्लम्स इच्छा | अन्त्य समझाइयो
स्कम्स विशको अन्तिम दृश्य कम्तिमा भन्नुको लागि चलिरहेको, दुःखी र भावनात्मक छ र यो धेरै निर्णायक पनि थिएन। अन्त्यमा हानाको एक साधारण भ्वाइस-ओभर देखाइएको थियो जुन उनीहरूको सम्बन्धमा के भयो र भविष्यमा के हुन गइरहेको छ।
हानाले शृङ्खलाको अर्को क्यारेक्टर, साने इबाटोसँग समलैंगिक यौन सम्बन्ध सुरु गरेको थाहा पाएपछि, मुगीले हानाप्रतिको चासो गुमाएको जस्तो देखिन्छ र यो उसले कसरी उनीबाट टाढा रहन थाल्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
यस पछि हानाले चिन्तन गर्न थाल्छ कि यदि मुगीले वास्तवमा उनको सबै फाइदा हुन्छ र यदि उनीहरूले यो सम्बन्ध राख्नु पर्छ भने। उनीले महसुस गर्छिन् कि अप्रत्याशित प्रेम यति अद्भुत छैन र त्यसपछि सबै प्रेम अचम्मको र इनामकारी छैन भनेर बुझ्दछ।
हाना त्यसपछि भ्वाइस-ओभरमा भन्छिन् कि आशा छ कि दुबैले प्रेम पाउनेछन् र फेरि कहिल्यै यस्तो काम गर्नु पर्दैन, होइन कि उनीहरूले वास्तवमा यो गर्न चाहेको थियो। हानाले साँचो प्रेम खोज्न चाहने र कसरी उनीहरू दुवैले आफूले मन पराउनेलाई भेट्टाउनेछन् भन्ने आशामा टिप्पणी गर्छिन्। अन्तिम दृश्यले हामीलाई देखायो कि हाना र मुगी आफ्नो पहिलो प्रारम्भिक सम्बन्धबाट अघि बढेका थिए र हुर्केका जस्तो देखिन्छ, यद्यपि मुगी अझै मिनागावासँग जोडिएको थियो र अझै पनि उसलाई आफू पछि हेर्छ र हाना स्वीकार गर्न सहमत छ।
अन्त्य भनेको हनबी र मुगीका लागि के अर्थ हो?
एनिमेमा अन्त्य बादल लागेको छ र एनिमेमा प्रस्तुत गरिएका सबै समस्याहरूको लागि राम्रो समाधान प्रस्ताव गर्दैन। यदि त्यो साँच्चिकै दुबै बीचको कुनै पनि भविष्यको सम्बन्धको अन्त्य हो भने, त्यसोभए किन यसलाई यत्तिको ढीला र नमिल्दो तरीकाले अन्त्य गर्नुहोस्, किन यो धेरै असन्तुष्ट भएको कुरा उल्लेख नगरौं। कारण यो छ किनभने यो हुनु हुँदैन। स्पिन-अफ म्गाले देखाउँदै छ जहाँ चरित्रहरू अब उनीहरूको जीवनमा छन्, यसले हामीलाई निश्चित गर्दछ कि मुगी र हानाले एक अर्कालाई फेरि भेट्दछन्। Scums Wish को अन्त्य मार्ग यो थियो किनकि यसले दोस्रो सत्रको लागि मार्ग प्रशस्त गरिरहेको थियो वा कम्तिमा यसलाई व्याख्याको लागि खोल्ने र वास्तवमै केहि पनि छोड्नुभयो।
सम्भवतः हामी हाना र मुगीलाई फेरि भेट्न जाँदैछौं, दुई फेरि एकअर्काको काखमा आउन केही समय लाग्न सक्छ तर हामीले केवल पर्खन र हेर्नुपर्नेछ। सत्य यो हो कि हाना र मुगी हुनु भनेको हो, यद्यपि तिनीहरू एकअर्काबाट टाढा छन् किनभने तिनीहरू सोच्छन् कि यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो वास्तविक रूपमा मात्र अरूलाई थाहा छ अरूको वास्तविक समस्याहरू र उनीहरूले उनीहरूसँग सामना गर्न के गरेका छन्।
Mugi को लागि सबै भन्दा राम्रो उम्मेद्वार हाना हुनेछ र Hana को लागि सबै भन्दा राम्रो उम्मेद्वार Mugi हुनेछ। यदि तिनीहरूले तिनीहरूको भिन्नताहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई जित्न सक्थे भने मलाई लाग्छ कि दुई एकअर्काको लागि उपयुक्त हुनेछन् किनकि उनीहरूलाई थाहा छ कि अर्कोले के गुज्र्यो, उनीहरूलाई के चलाउँछ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरूलाई कसरी सान्त्वना दिने।
यो स्पिन-अफ मंगामा अन्वेषण गरिएको कुरा हो त्यसैले हामी तपाईंलाई सिजन २ र त्यसपछि स्पिन-अफ मंगामा हाम्रो लेख पढ्न सुझाव दिन्छौं। हामी साँच्चिकै आशा गर्दछौं कि यो लेख तपाईले यस एनिमको बारेमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रश्नहरूको जवाफ दिन मद्दत गर्नको लागि प्रभावकारी भएको छ। हामी साँच्चै आशा गर्दछौं कि तपाईको दिन राम्रो छ, कृपया यो लेखलाई लाइक र सेयर गर्नुहोस् यदि तपाईले यो उपयोगी पाउनुभयो भने।
टैग: endingexplainedscumswish बकवास scumswishanime scumswishanimestory व्याख्या गरिएको छ बदमासी scumswishending व्याख्या गरिएको छ scumswishhappyend scumswishseason2 scumswishspinoffmanga सिजन2scumswish स्टोरीफिस्म्सविश
20 अगस्ट 2021 बिहान 3:20 बजे
मैले भर्खरै स्कमको इच्छा हेरेर समाप्त गरें र मलाई अन्त्य प्रकारको निराशाजनक लाग्छ। म यसको मीठो अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको थिएँ किनभने तिनीहरू सँगै समाप्त भएनन्। र म उत्तरहरू खोज्दै छु कि सायद तिनीहरू कुनै न कुनै रूपमा सँगै हुनेछन्। त्यसपछि, यो भ्लग पढेपछि, मैले महसुस गरें कि उनीहरूलाई एकअर्कालाई बढ्न र साँचो प्रेम पाउनको लागि ठाउँ चाहिन्छ। यदि तिनीहरू वास्तवमै एकअर्काको लागि हुन् भने, भाग्यले तिनीहरूलाई फिर्ता मार्गदर्शन गर्नेछ। साथै, मैले सिकें कि त्यहाँ एक स्पिन-अफ छ जहाँ अन्त्यले उनीहरू अन्ततः सँगै हुनेछन् भन्ने संकेत दिन सक्छ। म यसबाट खुसी छु, अहिलेको लागि। म थप घटनाक्रम को लागी प्रतीक्षा गर्नेछु।
११ सेप्टेम्बर २०२० साँझ :10::2021। बजे
हो, तपाईं सहि हुनुहुन्छ, यो धेरै दुःखी छ कि तिनीहरू एकअर्कालाई फेरि भेट्न पाउने छैनन्। तर हामी आशा गर्छौं कि तिनीहरूले गर्नेछन्। स्पिनोफ मंगाको सम्पूर्ण बिन्दु उनीहरूले आफ्नो जीवनमा कहाँ पुगेका थिए र उनीहरूले छुट्टै बाटोमा जाने निर्णय गरेपछि उनीहरूले कसरी सामना गरिरहेका छन् भनेर देखाउनु थियो। हामी साँच्चै आशा गर्छौं कि तपाईंले हाम्रो लेखको आनन्द लिनुभयो। टिप्पणी गर्नुभएकोमा धन्यवाद!
११ सेप्टेम्बर २०२० साँझ :11::2021। बजे
म अचम्मको रूपमा अन्त्यको साथ ठीक थिएँ।
Btw, मलाई लाग्छ हाना अझै कुमारी छिन् किनकि मुगी वास्तवमै उनीसँग तेस्रो आधारमा गएनन्।
मुगीले मेई र हानाबीलाई सानेसँग हानेपछिको त्यो एपिसोड, (तपाईं वास्तवमा प्राविधिक रूपमा आफ्नो कुमारीत्व गुमाउन सक्नुहुन्न?), हानाले सोचे कि उनी तयार छिन् तर जब मुगी भित्र जाँदै थियो, यो उनको लागि धेरै पीडादायी थियो उनले यो गर्न सकेनन्।
जे भए पनि, म मुगीमा आफुलाई सक्रिय रूपमा अकानेले प्रयोग गर्न दिएकोमा रिसाएको थिएँ। हाना र उनी दुवै साँच्चै खत्तम हुन्छन् तर म हानाबीलाई कम पीडा दिने छनौट गरेकोमा र उनको लगभग खतरनाक खेलहरूबाट बाहिर निस्कन सक्षम भएकोमा सलाम गर्छु (जस्तै अकानेको बोटोयको साथ)। उनले गरेको सबैभन्दा स्वार्थी सानेसँग थियो तर मलाई लाग्छ कि उनी पनि यसलाई सीधा गर्न सक्षम भइन्। हानाबीलाई थाहा छ कि उनले मुगीको लागि भावनाहरू विकास गरेकी छिन्। यद्यपि यो मुगीलाई अनुचित लाग्न सक्छ किनकि हामी यसलाई हनाबीको दृष्टिकोणबाट हेर्छौं, तर मलाई लाग्छ कि मुगीले आफूलाई हनाबीको लागि के महसुस गरिरहेको कुरालाई अस्वीकार गर्नको लागि आफ्नो भावना र लालसाले मातेको छ र म व्यक्तिगत रूपमा यस प्रकारका छनौटहरूलाई घृणा गर्छु। त्यो दृश्यमा जहाँ तिनीहरू छेउछाउमा बसिरहेका थिए र मात्र कुरा गरिरहेका थिए (अन्तमा), म भन्न चाहन्छु कि मुगी फेरि हनाबीसँग जोडिने आशामा थिए, उनको हात उनको छेउमा थियो, सम्भवतः हानाबीले पुग्ने प्रतीक्षा गर्दै। मलाई खुशी छ उसले गरिन। मुगी आफैंलाई थाहा छ कि हनाबी उहाँमा बढेको छ, र हामीले देख्यौं कि तिनीहरू दुवै अन्ततः एकअर्काको लागि लालायित छन् तर छुट्टिने बाटो रोजेका छन्।
म खुसी छु कि हनाबीले यो मुगीसँग अहिले सम्म समाप्त भएन। समयको अन्तरले वास्तवमा मानिसहरूको परिप्रेक्ष्यलाई फराकिलो बन्न र तिनीहरूलाई स्वतन्त्र हुन मद्दत गर्न सक्छ। कसरी सिजन समाप्त भयो, म मद्दत गर्न सक्दिन तर सोच्दछु कि उनीहरूले हामीलाई दोस्रो सिजनको लागि आशा दिइरहेका छन् वा भविष्यमा के हुन्छ र भित्र भित्र के हुन्छ भनेर देखाउनको लागि केवल एक OVA वा एउटा चलचित्र, मलाई थाहा छ कि तिनीहरू एकअर्काका उत्कृष्ट साथी हुन् र। साथी। परिपक्व हाना र मुगीको पुनर्मिलनले आफूले बनाएको बाङ्गो बाटोलाई सीधा गर्नेछ।
म आफैंलाई Akane btw मन पराउन सक्दिन, म हेरफेर गर्नेहरू र मानिसहरूको भावनासँग खेलौना गर्ने मानिसहरूलाई घृणा गर्छु जुन मैले आफैंले अनुभव गरेको छु।
हाम्रो हानाबी र मुगी बन्द हुने आशा गरौं।
हो पक्कै पनि हामी Akane मन पर्दैन। उनी एक अर्कासँग नहुनुको साँचो कारण हो र हनाबी र मुगी सधैं दुखी हुने कारण हो। तपाईंले भनेजस्तै उनी धेरै हेरफेर गर्छिन् तर ती दुबै खेल्छिन्। यो लज्जास्पद थियो, हनाबीले केहि गर्न सकेन। यदि हामीले हाम्रो लेखमा भनेजस्तै सिजन २ छ भने यो सम्भवतः स्पिन अफ मंगाको बारेमा हुनेछ। यो किनभने तिनीहरूको कथामा हामीले पाएका छौं। यद्यपि हामीले पर्खनु पर्छ र हेर्नु पर्छ।
२२ डिसेम्बर २०२१ बेलुकी ७:१८ बजे
ठिक छ, म अन्त्यमा सन्तुष्ट छु, किनकि म मुगीलाई उसको अन्धो प्रेमको लागि घृणा गर्छु, उसको "दया"(?) को लागि ओनि-सान मन पराउँदैन, उसको कुकुर र हेरफेर व्यक्तित्वको लागि अकानेलाई घृणा गर्छु।
व्यक्तिगत रूपमा, म विश्वास गर्छु कि हाना अझ राम्रो छ, कसैले उसलाई माया र सम्मान गर्छ, आशा छ कि उसले आफ्नो साँचो प्रेम पाउनुहुनेछ र अर्को विषाक्त सम्बन्धमा कहिल्यै संलग्न हुनुहुनेछैन।
हाम्रो हाना साँच्चै सुन्दर, प्यारा र दयालु छ, त्यसोभए उनी किन मुगीसँग फर्किनु पर्छ?
२६ डिसेम्बर २०२१ दिउँसो ३:५३ बजे
त्यसोभए तपाई सोच्नुहुन्छ कि किनकी मुगीले अकानेलाई अन्तमा रोजेका थिए, ऊ हानाको योग्य छैन? यो चाखलाग्दो छ, मैले यसलाई यसरी हेरेको छैन। मैले सधैं सोचे कि हानाबी र मुगी एकअर्काका लागि बनेका थिए, त्यसैले म अकानेको बारेमा कहिल्यै सोच्दिन। यो किनभने उनी हाना र मुगीको सम्बन्धमा बाधक मात्र हुन्।
अघिल्लो प्रविष्टि Narumi Kanai - चरित्र प्रोफाइल
अर्को प्रविष्टि शीर्ष १० एनिम शिमोनता जस्तै